NK | निजी क्षेत्रले चलाउन सक्ने विमान किन निगमले चलाउन सक्दैन? प्रधानमन्त्री अोली
निजी क्षेत्रले चलाउन सक्ने विमान किन निगमले चलाउन सक्दैन? प्रधानमन्त्री अोली
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यथास्थितिमा नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)लाई एक पैसा पनि दिन नसकिने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले ३७ अर्ब घाटामा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनमाथि सरकारको विश्वासनै नरहेको पनि स्पष्ट पारे। निगमको ६१औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल नेपाल वायुसेवा निगमको समग्र कामकारबाहीमा सुधार नभए सरकार त्यसका सञ्चालनका लागि रणनीतिक साझेदार खोज्न बाध्य हुने पनि स्पष्ट पारे।
‘निगमको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा तत्काल सुधार आउनुपर्‍यो, नभए त्यसको सञ्चालनका लागि सरकार रणनीतिक साझेदार खोज्न बाध्य हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको नेपाल वायु सेवा निगमलाई प्रश्न थियो, ‘निजी क्षेत्रले चलाउन सक्ने विमान किन निगमले चलाउन सक्दैन?’
प्रधानमन्त्री ओलीले वाइडबडी विमान चलाउनका लागि गन्तव्यको खोजी गर्न नसकेकोमा पनि आपत्ति जनाए। उनले सरकार निगमको साथमा रहेको तर निगमले विमान सञ्चालन गर्न नसकेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। ‘सरकार सहयाेग मात्र हैन काँध थाप्न पनि तयार छ। तर, आँखा चिम्लेर बिना ग्यारेन्टी रकम दिन मिल्दैन। त्यसमा पनि अहिलकाे अवस्थामा रकम दिन मिल्दैन। व्यवस्थापन ठिक हुनुपर्छ।’
सम्बोधन अवधिभर निगम व्यवस्थापनमाथि आक्रोश पोखेका उनले निगमको यस्तो अवस्था नसुध्रिए निगम सफल हुन नसक्ने ठोकुवा गरे। ‘यस्तो अवस्थामा नेपाल वायुसेवा निगम कसरी सफल हुन्छ? सफल हुन सजिलाे छैन। अहिलेसम्म भएकाे प्रगति र उन्नति के छ? कसरी ३७/३८ अर्ब ऋण भयाे। याे दान दिने संस्था त हैन। व्यापारिक संस्था हाे। किन सिकिस्त बिरामी छ? निगम नि:शूल्क स्वास्थ शिविर गर्ने संस्था त हैन,’ निगम व्यवस्थापनप्रति आक्रोश पोख्दै उनले प्रश्न गरे, ‘आफैंले आम्दानी गर्नुपर्छ। विमान उडाउन नसक्ने भए किन खरिद गरेकाे?’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले निगमको विमान उडान भर्नका लागि युरोपियन मुलुकहरुसँग पनि कुरा गरेको उल्लेख गर्दै भएका विमानहरुलाई चुस्त राख्न पनि सचेत गराए। वाइडबडी विमानको जापान उडानबारे चासो राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘वाइडबडीको गन्तव्य खाेई? विमान ल्यानुभन्दा पहिले नै याेजना तय हुनुपर्छ। किन जापानकाे ओसाका उडाउन खाेजेकाे? ओसाका हैन नारिता किन नउडान खाेजेकाे? नारिता उडानमा निगमले छिटाे तयारी गर्नुपर्छ।’
आकाशमा हुनुपर्ने विमानले एयरपोर्ट मात्रै ओगट्ने गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टि छ। भने, ‘विमान नउडाउने भए किन ल्याएकाे? फेरि किन विमान थप्ने कुरा हुन्‍छ? भएका विमान पनि उड्दैनन्। फेरि विमान लडाएर राख्न ल्याउने हाे?’
उनले विमान सञ्चालनको स्पष्ट योजनाका साथ काम गर्न पनि निगम व्यवस्थापनलाई सचेत गराए। प्रधानमन्त्री ओलीले निगमलाई आवश्यक बजेट दिन सकिने तर त्यसका लागि व्यवस्थापनमा सुधार हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे। उनले विमानका कारणले निगमले घाटा बेहोरेको नभई व्यवस्थापनका कारण यस्तो भएको जिकिर गरे।
‘अहिले जति रकम मागिएकाे छ, त्यति नै फेरि अर्काे वर्ष पनि दिनुपर्छ। खासमा यस्तो हुनुमा विमानले नाेक्सान गरेकाे हैन। हाम्रा कारण नाेक्सान भएकाे छ,’ ओलीको प्रश्न छ, ‘साग बेच्नेले तिरेकाे करले विमान खरिदकाे ऋण तिर्ने काम कहिलेसम्म हुन्छ?’